Wendy Lauren Sanchez - intatheli, omunye edume kakhulu ithelevishini American Fox. Abanye bathi ilapho lapho ukuba umuntu ovamile kakhulu, ngenxa wokuphila kwakhe konke owathatha intatheli kabanga namandla ukukhanyisa inkazimulo yakhe inkanyezi. Kodwa iqiniso liwukuthi, ngisho ngaphandle ukuqashelwa jikelele, Lauren Sanchez ungumuntu oqavile kumabonakude American.
Biography minyaka yokuqala
Lauren wazalwa ngo-December 19, 1969 e Albuquerque, esemgwaqweni saseNew eMexico. Kusukela esemncane intombazane aphupha nenkazimulo enkulu, kodwa ngoba, ngemva kokuphothula esikoleni, waya anqobe libalele Los Angeles. Kodwa, njengoba sengike lapha nje kwezinyanga ezimbalwa, ngabona ukuthi ngaphandle imfundo impumelelo kule izophila akazange athole.
Ngakho-ke, Lauren Sanchez watimisela kuya El Camino College, esemgwaqweni Torrance, California. Njengoba kuqhakanjiswe yena ukhetha "izindlela zokuxhumana". Ngaphezu kwalokho, ngokushesha nje ngemva kokufika, akutholayo umfundaze, ngakho iziqu ngempumelelo ekolishi.
Ngemva kokuthola iziqu ngo Lauren Sanchez emuva Los Angeles. Lapha-ke kuhlelwe co-ihange esiteshini KTVK-TV. ithalente lakhe ubona ukuphathwa kwenkampani, futhi uthola isikhundla, intatheli. Kodwa kwasheshe bayengelwa ukuba ezemidlalo isiteshi, lapho uyabuthola umethuli indawo.
Ngo-2005, Lauren Sanchez iba ubuso uhlelo ukuzijabulisa "Ucabanga ungakwazi dance?" Ngakolunye isiteshi Fox. Lokhu kwakuwumnikelo ka-umvuthwandaba wawo intatheli, ngemva kokubuka le show yonke iMelika. Kodwa ngemva isizini yokuqala Lauren isikhathi eside kokushiya i-TV, njengoba ulungiselela uba umama.
Kuphela 2009, Sanchez ibuyisela. Zuza for wakhe zifakwe endaweni kusiteshi KTTK-TV (Fox lobulungu e-Los Angeles). Namuhla yena usebenza khona njengoba umlobeli othile okhethekile block izindaba. Ngaphezu kwalokho, it is izibandakanye ezinhlelweni eziningi izinhlelo zethelevishini, ethandwa kakhulu okuyinto "Sawubona, eLos Angeles."
Impi ezazivela abantu abanesibindi kakhulu